Burkiinaa Faasoon mootummaa cee’umsaa Mikaa’el Kafaandoon hoogganamu dhaabbatte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Burkiinaa Faasoon mootummaa cee’umsaa Mikaa’el Kafaandoon hoogganamu dhaabbatte
Koreen addaa Burkinaa Faasoo Ministera Haajaa Biyya Alaa (MHBA) durii kan ta’e Mikaa’el Kanfaadoo (umrii 72) perezidaantii mootummaa cee’umsaa godhee filate. Kanfaadoon perezidaantii biyyattii ta’ee tura hanga filmaata woliigalaa Sadaasaa bara 2015 jechuudha. Kanfaadoon, MHBA duraanii, kan filatame koree biyyoolessaa nama 23 ufkeessaa qabuun. Koreen kuni bakka bu’oota angawoota woraanaa, dhaabbilee amantaa fi hawaasaa, fi garee mormituu siyaasaa irraa namoota wolitti dhufan irraa kan ijaarameedha.
‘Koreen kuni akka hiree biyyattii yeroodhaaf qajeelchu nafilateera. Kuni anaaf kabajaa guddaadha. Dhimmicha siranaan irratti hojjadha’ jechun Kanfaandoon gaazexessootaafi koree isa filatetti dubbate.
Fonqolchaa perezidaantii Blees Kompaa’oree booda, koloneel Izaak Ziidaa angoo fudhatee, heera biyyattiis diigee ture. San booda angawoota Burkiinaa Faasoo irratti dhiibbaan bifa garagaraa godhamaa ture, akka angoo gara ummataatti deebisaniif jecha. Gamtaan Aafrikaa angawoonni woraana biyyattii yeroo torbaan lama hincaalle keessatti taaytaa ummatatti hindeebisan taanaan qoqobbii akka irratti gatu sodaachisee ture. Egaa dhiibbaa wolirraa hincinne kana MHBA duraanii Kanfaadoon perezidaantii mootummaa cee’umsaa ta’ee akka filatamu kan dandeessise.
Kanfaandoon yeroo addaddaatti mootummaa Blees Kompaa’oree jalatti angoo gurguddaa qabaachaa ture. MHBA biyyattii ta’uun alatti, bakka bu’aa Burkiinaa Faasoo Gmtaa Biyyoota Addunyaa (UN) ta’uudhaan tajaajileera. Kaadhimamaa perezidaantii cee’umsaa ta’uu isaa angawoonni woraana biyyattii mormanii turan.
mootummaa ce'umsa burkiinaa faasoo
Previous articleDaandiin Xayyaara Itoophiyaa Daandii Xayyaara Aafrikaa 2014 ta’uun muudame
Next articleYayaa Turee taphataa Aafrikaa ta’uudhaan muudame